तिथि मेरो पत्रु »5तरिका तपाईंको जीवन प्रेम खोजें!
हामी सबै निरन्तर हो, subconsciously वा जानिजानि कि, एक को खोज मा. हामी हाम्रो जीवन साझा र जो सक्ने त्यो व्यक्ति शराबी बिल्ली संग एक तला रहन को भाग्य स्थायी हामीलाई बन्द हुनेछ. यहाँ लागि तिर्न केवल पाँच कि भाग्य जोगिन तरिकाहरू र बिरालो खाना को भएको असंख्य मात्रामा छन्!
एक रात कक्षा गर्नुहुन्छ
साधारण चासो यहाँ महत्वपूर्ण छ. यो चाहे फोटोग्राफी वा रचनात्मक लेखन छ, सधैं आफ्नो गतिविधिलाई शामिल छ एक रात वर्ग चयन. यो एक soulmate प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बुझन एक ठूलो कुरा हो. तपाईं प्रत्येक अन्य तिर झुकन जो धेरै सुन्दर प्रकार प्रत्येक अन्य र धेरै शान्त eccentrics तिर झुकन किन हो प्रत्येक अन्य प्राप्त गर्न छ. के तपाईं आफैलाई यो चासो हो जो एक रात वर्ग चयन भने तपाईं बस आफैलाई जस्तै मान्छे भेट्न भनेर संभावना बढ्छ.
सामान्य मान्छे धेरै अब तिनीहरू डरले किनभने बारहरू र क्लब मा प्रत्येक अन्य गएर छैन मा मानिसहरूले ढोंगी वा केहि हुन् जस्तो लाग्छ सक्छ. प्रेम ढकमक्क जहाँ तर तिनीहरूले अझै पनि छन् ठान्नुहुन्छ. पेय बग्छ रूपमा मान्छे मान्छे उनीहरू पूरा गर्न अझै ठूलो ठाउँ हुन् कि अर्थमा यति भन्न के बारेमा धेरै तिनीहरूलाई सोच्न वा चिन्ता के धेरै आधा चिन्ता गर्छन छैन. जाहिर म त्यस रात तिनीहरूलाई घर जाने सल्लाह तर तिनीहरूको संख्या लिन छैन. यो कुरा को शुरुवात हुन सक्छ.
कि सुनिन्छ रूपमा मान्छे को बहुमत पट्यारलाग्दो रूपमा आफ्नो जीवनको प्रेम कहाँ पाउँछन् कार्य छ. त्यसैले सक्नुहुन्छ भने तपाईं प्रेम जागिर मा हुन प्रयास र तपाईं जस्तै कसैले क्लिक हुनेछ एक विशाल मौका त्यहाँ. अनि तपाईं वरपरका लजालु हुनुहुन्छ भने, चिन्ता छैन. यो के मतलब छ भने, यो के छौँ. अनि छैन भने, उनि भन्छन् धेरै अधिक माछा समुद्रमा त्यहाँ.
यस gigging क्षेत्रीय मान्छे को बैठक को लागि शानदार छ. यो तपाईं जस्तै केहि भनेर बरफ विच्छेद गर्न मात्र पट्टी क्षेत्रीय जस्तै छ, “म तपाईं खेलेको riff प्रेम।” यो पनि त एक बाजा सिक्न बाटो एक र मित्र धेरै पूरा गर्न एक धेरै सजिलो तरिका हो, तपाईं पहिले नै एक खेल छैन भने, र त्यहाँ बाहिर प्राप्त र केही gigs गर्न.
बानेश्वरमा देखा पर्दैन
म एक पूरा गर्न चार तरिकामा सूचीबद्ध छन् तर पछिल्लो शायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं आफ्नो जीवन पूरा गर्ने कुनै पा आसपास घूमती जस्तै तिमी भर आयो छैन पक्का छ. तिमी धेरै आफ्नो जीवन मा रहेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित र व्यक्तिलाई बैठक आफ्नो मिशन को मात्र एक भाग हो, होइन सम्पूर्ण मिशन. यो विशेष आफ्नो भविष्य कल्पना कसरी छैन भने पनि अर्को शब्दमा तपाईं तला मा शराबी बस्न पर्याप्त बलियो छौं भनेर देखाउने छ. आफ्नो छाला मा विश्वस्त देखा पर्छन्. अधिक आकर्षक केही छैन.
एक व्यावसायिक अनलाइन Dater बन्ने होसियार हुनुहोस्